डा. केसीका मागले नेकपादेखि कांग्रेससम्म भूइचालो, भ्रष्टको दाग लाग्ने भएपछि भीभीआईपीको भागाभाग…हेर्नुहोस् । – Nepal Online Khabar
डा. केसीका मागले नेकपादेखि कांग्रेससम्म भूइचालो, भ्रष्टको दाग लाग्ने भएपछि भीभीआईपीको भागाभाग…हेर्नुहोस् ।
October 10, 2020 129
काठमाडौ : डाक्टर गोविन्द केसीको मागले अहिले सरकार मात्र हैन प्रतिपक्ष समेत र उनीहरुसँगको साँठगाँठमा रहेका विचौलीहरु समेत झस्किने मागले सबैमा भूकम्प आएको छ । कांग्रेसले बोकेको भनिएका डा. केसीले देउवा देखि माधबकुमार नेपालसम्मको पसिना छुटाएपछि अहिले भागाभाग भएको छ ।
वाइडबडी प्रकरणमा नेकपा र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताको नाम जोडिएको छ । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री एवं नेकपा नेता गोकुल बास्कोटाको नाम जोडिएको छ । यती होल्डिङ र ओम्नीलाई औषधि खरिद गर्न दिने प्रक्रियामा सरकारमा रहेकाहरुले ठूलो रकमको चलखेल गरिएको आशंका गरिएको छ । यसले शीर्ष अधिकांशलाई भ्रष्ट्राचारको हिलो छ्याप्नेगरी केसीले माग राखेपछि अब उनीहरुका लागि निक्कै ठूलो सकस भएको छ । जनबोली बाट
Prevउपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ : डा. केसीले उठाउनुभएको कुन माग सान्दर्भिक छैन ?
Nextअमेरिकाको निर्वाचनमा किम जोंग उनको प्रवेश, राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भारी नोक्सान हुन सक्ने…हेर्नुहोस् ।
असोज १८ गते ब’न्दको घो’षणा…हेर्नुहोस् ।
चीनले दियो नेपाललाई यस्तो बलियो साथ ,भयो भारतमा भयो खैलाबैला…हेर्नुहोस।
क्यान्सर देखि सुगर सम्मका रोगलाई निको पार्ने नेपाली जडिबुटी